काठमाडाैँको घटनाः ‘प्रेमिकाको न’ग्न तस्बिर पठाएर २ दर्जन पुरुषसँग पैसा उठाएँ’ - e-Sidha Nepal
हाम्रो संवाददाता ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार ०७:३९
सुनसान कोठामा फकाईफुलाई प्रेमीले रोजिनासँग शारी’रिक स’म्बन्ध राखे । त्यतिमात्र नभइ रोजिनाको ना-ङ्गो तस्बिरहरु पनि खिच्न भ्याए । रोजिनाको उक्त न’ग्न फोटो विदेशमा रहेका नेपालीहरु समक्ष पुगेको पाइएको छ ।
त्यही ‘न-ग्न फोटो’ विदेशमा रहेका नेपालीलाई उनले पठाउथे उता विदेशमा केटाहरु पनि केटी नै हो भन्ठानेर मख्ख पर्दै गफिन्थे ।
रोजिना नामको फेसबुकबाट विदेशमा रहेका जो कोही केटाहरुसँग भावुक कुराहरु हुन्थ्यो । तर, के थाहा विदेशमा रहेका केटाहरुलाई त्यो ‘रोजिना’ नामको फेसबुक आईडी नक्कली हो भनेर । आफ्नो प्रेमिकालाई कोठामा लिएर गएको बेला खिचेको त्यही ‘न-ग्न फोटो’ विदेशमा रहेका नेपालीलाई उनले पठाउथे उता विदेशमा केटाहरु पनि केटी नै हो भन्ठानेर मख्ख पर्दै गफिन्थे ।
‘न्यु-ड फोटो’ विदशेमा रहेको पुरुषहरुसमक्ष पुगेको छ भन्ने कुरा गाउँमा रहेकी रोजिनालाई के थाहा ? तर पनि प्रहरीकोमा पुगेपछि मात्रै
ना-ङ्गो फोटो पठाउनुको पनि कारण थियो, ‘विदेशमा रहेका नेपालीसँग पैसा असुल्नु ।’ विदेशमा रहेका धेरैले रोजिनाको ‘न-ग्न फोटो’ हेरेबापत पैसा पनि पठाइदिन्थे । पोज–पोजको फोटो पठाउन समेत भन्थे । उनले पनि प्रेमिका (रोजिना) को ना-ङ्गो फोटोहरु पठाइदिन्थे । पैसा असुलिरहन्थे ।
यता, आफ्नो ‘न्यु-ड फोटो’ विदशेमा रहेको पुरुषहरुसमक्ष पुगेको छ भन्ने कुरा गाउँमा रहेकी रोजिनालाई के थाहा ? तर पनि प्रहरीकोमा पुगेपछि मात्रै रोजिनाले घटनाबारे जानकारी पाइन् ।
साइबर क्रा-इमको ध-म्कीपछि खुल्यो पोल
तर, रोजिनाले तत्कालै ‘न-ग्न फोटो’ पठाइदिन्छिन् । त्यतिबेला ती युवकले ‘न्यु-ड फोटो’ नभई सामान्य फोटो पठाउन भनेका थिए । तर, रोजिनाले ‘न-ग्न फोटो’ पठाएपछि ती युवकले अरु पनि पठाउन आग्रह गर्छन् । रोजिनाले थप चार–पाँच वटा ‘न्यु-ड फोटो’हरु पठाउँछिन् । ती न्यु-ड फोटो फेसबुकको प्रोफाइलमा राखिएको केटीको नै थियो । युवक झनै विश्वस्त हुन्छन्, यो केटी नै हो ।
‘न-ग्न फोटो’ पठाएकी रोजिनाले केही दिनपछि ती युवकसँग पैसा सापट माग्छिन् । ती युवकले अहिले आफ्नो तलब नआएको र पछि पठाइदिन्छु भन्दै आश्वस्त पार्न खोज्छन् । लास्टै गाह्रो भएको भन्दै रोजिनाले फेरि दुःख पोख्छिन् ।
अहिले कतैबाट म्यानेज गर भन्दै रोजिनालाई सम्झाउन खोज्छन् ती युवक । पैसा नआउने भएपछि रोजिनाले ‘साइबर क्रा-इम’ को मु-द्दा हाल्दिम भन्दै युवकलाई ड-र देखाउँछिन् । ७० हजार नेपाली रुपैयाँ माग्छिन् ।
अनि ती युवकलाई शं-का लाग्छ । त्यो रोजिना नामको फेसबुक आईडी नक्कली हुनसक्छ । तत्कालै ती युवकले घट-नाबारे नेपालमा रहेका आफ्नो दाईलाई जानकारी गराउँछन् ।
यसरी प-क्राउ परे अभियुक्त एकराम राई
गत हप्ता महानगरीय अ-पराध महाशाखा टेकुमा ती युवकको दाई घटनाको विवरण लिएर पुग्छन् । तत्कालै रोजिना नामको फेसबुक आईडीबारे प्रहरीले अनुसन्धान थाल्छ ।
पैसा झिक्न गएको मौकामा ती व्यक्ति अप-राध महाशाखाको फन्दामा पर्छन् । ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा रोजिना नामको केटी ती युवकको प्रेमिका रहेको खुल्छ ।
प्रेमिकाको नाममा नक्कली आईडी खोलेर विदेशमा रहेका २ दर्जन पुरुषहरुलाई ‘न-ग्न फोटो’ पठाएर पैसा मागेको अभियुक्तले स्वीकार गर्छन् । र, ती अभियुक्त अर्थात् कथित प्रेमीचाहिँ खोटाङ घर भएका एकराम राई हुन्, जो यतिबेला प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।
‘फेसबुक च्याटमा कुराकानी हुँदा फोटो पठाऊ भन्थे,’ एकरामले भनेका छन्, ‘मैले पनि केही पनि नसोची फोटो पठाइरहेँ । पैसा कमाउनको लागि ग-लत बाटो रोजेँ कि भन्ने पनि सोच्ने गर्थेँ, तै पनि सही बाटो रोज्न सकिनँ ।’
एकरामका अनुसार हालसम्म विदेशमा रहेका २ दर्जनभन्दा बढी पुरुषहरुलाई प्रेमिकाको ‘न-ग्न फोटो’ पठाएर पैसा मागेका छन् । कति पुरुषले पैसा पनि पठाएका छन् भने कतिले पछि पठाउँछु भनेका थिए ।
विश्वास गरेको मान्छेले त यतिसम्म गर्छ भने अरुको के विश्वास ?,’ रोजिना भन्छिन्, ‘घरपरिवारलाई घटनाबारे खबर गरेर प्रहरीमा जाहेरी दिँदैछु
घट-नाबारे रोजिना अनभिज्ञ थिइन्
विदेशमा रहेका पुरुषलाई आफ्नै न-ग्न तस्वीर पठाएको कुरा रोजिनालाई थाहा नभएको एकरामले बताएका छन् । महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाका अनुसार कथित प्रेमी राईले प्रेमिकाको न-ग्न तस्वीर पठाएर अ-सुली ध-न्दा नै चलाएका थिए ।
रोजिनाले आफ्नो ना-ङ्गो फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइदिने प्रेमी एकरामविरुद्ध साइबर अप-राधमा मु-द्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेकी छन् । ‘विश्वास गरेको मान्छेले त यतिसम्म गर्छ भने अरुको के विश्वास ?,’ रोजिना भन्छिन्, ‘घरपरिवारलाई घटनाबारे खबर गरेर प्रहरीमा जाहेरी दिँदैछु ।’
गौशालास्थित कोठाबाटै पक्रा-उ परेका एकराममाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘न-ग्न फोटो’ पठाउने र पैसा असुल्नेको गिरोह नै सक्रिय
काठमाडौँमै बस्दै आएका एक प्रेमी–प्रेमिका मिलेर पनि ‘न-ग्न फोटो’ पठाउँदै पैसा असुल्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको एसएसपी थापाले बताए । उनले भने, ‘उनीहरुले नेपालमै रहेका पुरुषहरुलाई ‘न-ग्न फोटो’ पठाउने र पैसा असुल्ने गरेका छन् ।’
‘फेसबुकको वालमा प्रेमिकाको फोटो राखेर प्रेमी–प्रेमिका नै मिलेर पैसा असुली ध-न्दा
केटाकेटी मिलेर विदेशमा रहेका पुरुषहरुलाई भन्दा पनि नेपालमै रहेका पुरुषहरुलाई ‘न-ग्न फोटो’ पठाउँदै पैसा बार्गेनिङ गर्नेको गि-रोह काठमाडौँमा सक्रिय रहेका पाइएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको एसएसपी थापाले बताए ।
‘फेसबुकको वालमा प्रेमिकाको फोटो राखेर प्रेमी–प्रेमिका नै मिलेर पैसा असुली ध-न्दा गरिरहेको पनि पाइएको छ । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ–नयाँ समस्याहरु सिर्जना हुँदै गएको प्रहरीको अनुसन्धान र प्राप्त भएको उजुरीले देखाउँछ,’ एसएसपी थापाले भने, ‘कथाजस्ता लाग्ने घ-टना फेसबुक र सामाजिक सञ्जालबाटै हुने गरेको छ ।’
महाशाखाका एसपी होबिन्द्र बोगटी यसको सिका-रमा स्कुले उमेरका केटाकेटीदेखि कलेज पढ्ने युवायुवतीसम्म परेको बताउँछन् । लकडाउनको अवधिमा यस्तो घ-टनाहरु बढ्दो रहको एसपी बोगटी बताउँछन् । ‘घरमै दिनभरी बस्ने र काम नभएको बेला मान्छेलाई के गरौं के गरौं हुन्छ,’ एसपी बोगटीले भने, ‘अन्ततः मान्छे डिप्रे-सनमा जाने र दिमागले पुरै नकारात्मक सोच्छ र यस्ता अप-राधहरु हुन्छन् ।’ यो खबर सुजन पन्तले रातोपाटीमा समाचार छ ।